လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေ - သင့် ဦး နှောက်ပေါ်၌သင်၏ ဦး နှောက်
Many of the unwanted effects of porn are caused by conditioning one’s sexual response to the internet porn’s content and delivery system. Examples include some users’ morphing sexual tastes, porn-induced ED, loss of attraction to real partners (even belief in one’s asexuality), delayed ejaculation, anorgasmia, needing greater stimulation to achieve the same arousal state. For years experts have endeavored to call attention to this phenomenon, and other evidence of sexual conditioning. See for example:
ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံ၊ လိင်မလုံခြုံမှုနှင့် Orgasm အခက်အခဲ
ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံသုံးစွဲမှုကြိမ်နှုန်းသည်အမျိုးသမီးငယ်များအကြား [အော်ဂဇင်စ်အခက်အခဲ] ကိုအထူးအားကောင်းစေသောခန့်မှန်းချက်တစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။
လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ် ဦး နှင့်လိင်ဆက်ဆံမှုအတွက်အလုပ်လုပ်ခြင်းကိုပိုမိုနှစ်သက်ကြောင်းသင်တန်းသားများကထုတ်ဖော်ပြောကြားသော်လည်းကျွန်ုပ်တို့၏အချက်အလက်များအရတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုမှီခိုမှုသည်သူတို့၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုန့်ပြန်မှုအပြုအမူများပေါ် မူတည်၍ ဖြစ်ပေါ်လာပြီးတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်းကာလအတွင်းကွဲပြားခြားနားသောလက္ခဏာများကိုပြသသည့်သိမြင်မှုဆိုင်ရာအစိတ်အပိုင်းများဖြင့်အားဖြည့်ပေးသည်။ မိတ်ဖက်လိင်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ [လူနာများ] က၎င်းတို့သည်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများနှင့်မတူကွဲပြားမှုများဖြစ်ပွားခြင်းနှင့်ကြုံတွေ့ခဲ့ရသည်ဟုအစီရင်ခံသော်လည်း၎င်းမပါရှိပါကယနေ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်ပြproblemsနာများမြင့်တက်လာခြင်းနှင့်အမျိုးသားများအောက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒနိမ့်ကျခြင်းတို့အတွက်မတော်တဆလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအေးစက်မှုကိုတားဆီးရန်သုတေသနလိုအပ်သည်။ ၄၀ ။
မကြာခဏဆိုက်ဘာ-ညစ်ညမ်းအပေါ်တစ်ဦးမှီခိုအားဖြင့်လိုက်ပါသွားစွဲလမ်းတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ, erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုသို့မဟုတ် coital anejaculation အချို့အမျိုးအစားများ၏ etiology အတွက်အခန်းကဏ္ဍမှမြင်ကြပြီ။ ဒါဟာစနစ်တကျမဟုတ်ဘဲထိုအအလုပ်မဖြစ်စီမံခန့်ခွဲခြင်းအတွက်အလေ့အထ-ခြိုးဖောကျ deconditioning နည်းစနစ်များပါဝင်သည်နိုင်ဖို့အတွက်ဖျက်သိမ်းရေးအားဖြင့်တစ်ဦးရောဂါလက္ခဏာတွေကိုလုပ်ဆောင်သွားရန်ထက်ကဤအလေ့အထ၏ရှေ့မှောက်တွင်ကိုသိရှိနိုင်ဖို့ကအရေးကြီးတယ်။
အမေရိကန်အရွယ်ရောက်ယောက်ျားများအတွက်သက်တမ်းတစ်လျှောက် Deviant Sexual Fantasy ကို attenuation (၂၀၂၀)
လေ့လာမှုအရ ၁၈-၃၀ အရွယ်အုပ်စုသည်လိင်မှုဆိုင်ရာစိတ်ကူးယဉ်မှုအမြင့်ဆုံးဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြခဲ့ပြီး ၃၁-၅၀၊ ထိုနောက်အသက် ၅၁-၇၆ နှစ်ဖြစ်သည်။ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပြောရလျှင်၊ ညစ်ညမ်းမှုနှုန်းအမြင့်ဆုံးနှုန်းထားရှိသည့်အသက်အရွယ်အုပ်စုနှင့်မည်သူကြီးပြင်းလာသနည်း ပြွန်က်ဘ်ဆိုက်များ) လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကြံစည်မှုအမြင့်ဆုံးနှုန်းထားများ (မုဒိမ်းမှု၊ fetishism၊ ကလေးသူငယ်များနှင့်လိင်) ကိုအစီရင်ခံပါ။ ဆွေးနွေးမှုကဏ္fromမှကောက်နုတ်ချက်အရညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများအသုံးပြုခြင်းသည်အကြောင်းပြချက်ဖြစ်နိုင်သည်။
ထို့အပြင်အသက် ၃၀ နှစ်အောက်ကလေးများသည်အသက် ၃၀ ကျော်သူများထက်လိင်ဆိုင်ရာစိတ်ကူးယဉ်ဆန်ဆန်လိင်မှုဆိုင်ရာစိတ်ကူးယဉ်မှုများအားအဘယ်ကြောင့်ထောက်ခံရခြင်းမှာဖြစ်နိုင်ချေရှိသောရှင်းပြချက်သည်ငယ်ရွယ်သောအမျိုးသားများအကြားညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသုံးစွဲမှုကြောင့်ဖြစ်သည်။ သုတေသီများတွေ့ရှိချက်အရညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ၁၉၇၀ ပြည့်နှစ်များမှ စ၍ ၄၅% မှ ၆၁% အထိမြင့်တက်လာသည်။ အချိန်ကာလတစ်ခုသည်အရွယ်ရောက်ပြီးသောသက်ကြီးရွယ်အိုအုပ်စုများအတွက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသုံးစွဲမှုလျော့နည်းလာသည် (Price, Patterson, Regnerus & Walley, 30) ။ ထို့အပြင်ဆွီဒင်လူငယ်အရွယ် ၄၃၃၉ လူငယ်များအကြားညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသုံးစွဲမှုလေ့လာမှုတွင်ပါဝင်သူများ၏သုံးပုံတစ်ပုံမကအကြမ်းဖက်မှု၊ တိရိစ္ဆာန်များနှင့်ကလေးများအားလိင်ဆိုင်ရာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုခြင်း (Svedin, ermankerman, & Priebe, 30) ကဖော်ပြခဲ့သည်။
Pornography Use and Intimate Partner Violence AmongaSample of U.S. Army Soldiers in 2018: A Cross-Sectional Study
Multivariable negative binomial regressions were used to assess the association between pornography use and any lifetime perpetration of IPV, controlling for gender, age group, race/ethnicity, relationship status, educational status, military rank, hazardous drinking, depression, stimulant use, depressant use, and post-traumatic stress disorder. Of the population analyzed, 41% of soldiers reported any pornography use per week, and 9.6% reported perpetrating any form of IPV. Soldiers who reported pornography use had betweena1.72- and 3.56-fold greater likelihood of reporting any lifetime perpetration of IPV, controlling for covariates.
Dual Control Model - လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတားမြစ်ချက်၏အခန်းကဏ္ Excitation လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနိုးကြားမှုနှင့်အပြုအမူ (၂၀၀၇)
အမျိုးသားများရဲ့ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုအချို့၊
erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုကြုံတွေ့ရလူတို့သညျ porn "ရှိရာအရက်ဆိုင်များနှင့် bathhouse အတွက်အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုစဉ်းစားဆင်ခြင်စရာငွေပမာဏကိုသုံးစွဲခဲ့သည်ပျံနံ့, "နှင့်"စဉ်ဆက်မပြတ်ကစား"။ အဆိုပါသုတေသီများဖော်ပြထား:
ငုံးများတွင်လိင်မှုဆိုင်ရာအေးစက်မှုနှင့်ပတ်သက်သောဤလေ့လာမှုအရယောက်ျားများသည်လိင်မှုဆိုင်ရာစစ်မှန်သောလိင်အဖော် (အစားထိုးအထည်အရာ ၀ တ္ထု) တစ်ခုအတွက်အစားထိုးနိုင်သည်ဟုပြသထားပါသည်။ စိတ် ၀ င်စားစရာမှာ၊ အရာဝတ္ထုကိုအသုံးပြုပြီး (ဆိုလိုသည်မှာ“ ပြီးပြည့်စုံသောတုံ့ပြန်မှုကိုပြသည်”) ကိုကော်ပိုရိတ်သူများသည်စစ်မှန်သောအမျိုးသမီးများနှင့်ပုံမှန်လိင်အခွင့်အလမ်းများကိုလက်လှမ်းမီသည်ဖြစ်စေ၊
အထီးငုံး၏အခြေအနေကိုချဉ်းကပ်သောအပြုအမူ [အရာဝတ္ထုနှင့်အတူစုစည်းခဲ့သူ] သည်မျိုးသုဉ်းခြင်းစမ်းသပ်ကာလအတွင်းအထီးများအနေဖြင့်၎င်းတို့၏နေအိမ်အိတ်များ၌အမျိုးသမီးတစ် ဦး အား ၀ င်ရောက်ခွင့်ရရှိခြင်းရှိမရှိပြသခြင်းသည်များစွာပြသနာမရှိကြောင်းပြသခဲ့သည်။
အလားတူစွာ၊ လိင်စိတ်နှိုးဆွမှုကိုအတုလှုံ့ဆော်မှု (ညစ်ညမ်းမှု) အဖြစ်ကူးစက်ပြီးနောက်နောက်ပိုင်းတွင်လိင်မှုဆိုင်ရာမိတ်ဖက်များဆွတ်ခူးသောအမျိုးသားများစွာသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုဆက်လက် (တစ်ခါတစ်ရံတွင်အတင်းအကျပ်ပင်အသုံးပြုခြင်း) ကိုသတင်းပို့ကြသည်။
အမျိုးသမီးများအတွက် ၀ င်ရောက်ခွင့်မရသောငုံးများသည်အရာဝတ္ထုကိုပိုမိုအသုံးချရန် (ပိုမိုမကြာခဏကူးစက်ခြင်း) ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ အရာဝတ္ထုနှင့်အတူ၎င်းတို့၏ copulation ၏ကြိမ်နှုန်းသိသိသာသာတိုးတက်လာခဲ့သည်။ တိုတောင်းသောခုနှစ်တွင်အတုလှုံ့ဆော်မှုတစ်ဖြစ်လာခဲ့သည် မူလတန်း တကယ့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ် ဦး နှင့်တူသော်လည်းလှုံ့ဆော်မှုဖြစ်သည်။
CSBD (Compulsive Sexual Behaviour Disorder) ၏အဓိကပြproblemနာတစ်ခုဖြစ်သည့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်း / မူးယစ်ခြင်းများအတွက်သူတို့၏သုတေသန၏အကျိုးဆက်များကိုသုတေသီများကဆွေးနွေးကြသည်။
တစ် ဦး ချင်းစီ၏အခြေခံလိုအပ်ချက်များသည်ချစ်ရသူနှင့်ဆက်နွယ်မှု၊ ရင်းနှီးမှုနှင့်လိင်ဆက်ဆံမှုတို့ကဲ့သို့မကျေနပ်လျှင်စိတ်ကျေနပ်မှုကိုအစားထိုးနိုင်သည်။ လိင်မှုဆိုင်ရာအကာအကွယ်ပေးသောတုံ့ပြန်မှုများအတွက်အခွင့်အလမ်းပေးသောမည်သည့်အရာဝတ္ထုသို့မဟုတ်လုပ်ရပ်မဆိုအတင်းအကျပ်စေ့စပ်ညှိနှိုင်းခြင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှု (သို့) fetishistic အပြုအမူကို ဦး တည်စေသည့်အာရုံခံအားဖြည့်မှုကိုပေးလိမ့်မည်။
... အစားထိုးအရာဝတ္ထုနှင့်အတူကူးယူလုံးဝစိတ်ကျေနပ်မှုမဟုတ်ပါဘူးနှင့်လုံးဝလိုအပ်ချက်ပြည်နယ်ဖယ်ရှားပစ်မထားဘူး။ ထို့ကြောင့်မျိုးသုဉ်းမှုအဆင့်တွင် No အမျိုးသမီးငယ်များပါ ၀ င်သူများ၏အခြေအနေသည်တဖြည်းဖြည်းတိုးပွားလာသည်။ ဤသည် [အစားထိုး, အေးစက်လှုံ့ဆော်မှု] မှအေးစက် copulatory တုံ့ပြန်မှုအတွက်သက်ဆိုင်ရာတိုးမှုအလှည့်၌တည်၏။ ကျွန်ုပ်တို့၏မော်ဒယ်ကဤသို့လိင်ဆက်ဆံခြင်းကို (တိုးပွားလာသောတုံ့ပြန်မှုများ၊ ကူးစက်ခြင်း) များတိုးပွားလာခြင်းကို (၁) တိရိစ္ဆာန်များသည်ဇီဝဗေဒအရသိသာထင်ရှားသော [လှုံ့ဆော်မှု] (ရှင်သန်သောအမျိုးသမီး) မှကာကွယ်ခြင်းခံရသည်၊ (၂) ဆင်းရဲချို့တဲ့မှုသည်ထိုလိုအပ်ချက်ကိုတိုးပွားစေသည်။ ] နှင့် (1) ပါ ၀ င်သူများအနေဖြင့်၎င်းတို့လိုအပ်သောအခြေအနေကိုလျှော့ချရန်အတွက်အတူတကွပြုလုပ်နိုင်သည့်အစားထိုးအရာဝတ္ထုရှိသည်။
It is each animal’s unique experience with sexual behavior and sexual reward that molds the strength of responses made toward sexual incentives.
Somatosensory cues [such as wearingarodent jacket during early sexual encounters] can signal sexual excitation or inhibition in male rats depending on the conditioning history.
SEM [sexually explicit media] consumption was found to be significantly associated with sexual risk behaviors. Participants with increased consumption of bareback SEM reported higher odds of UAI [unprotected anal intercourse] and I-UAI [insertive anal intercourse] after adjusting for other factors using multivariable statistics.
Porn survey 2019: how internet pornography is changing the way we have sex
အချို့သောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံလွှာအသုံးပြုသူများအရှိန်မြှင့်တင်ခြင်းကိုလေ့လာသည့်လေ့လာမှုများစွာသည်ဤနေရာတွင်လည်းသက်ဆိုင်နိုင်သည်။ ကြည့်ပါ porn ကိုအသုံးပြုခြင်း (သည်းခံစိတ်) ၏တင်းမာမှုနှင့်ကိုက်ညီတွေ့ရှိချက်, porn ဖို့လေ့နှင့်ပင်ဆုတ်ခွာလက္ခဏာတွေသတင်းပို့ 50 လေ့လာမှုများကျော်.
We Can’t Consent To This. The horrifying harms of choking – new research
အစ်ကို-အစ်ကိုသှေးရငျးခငျြးကာမဆကျဆံခွငျး: တစ်ခုအမည်မသိ Computerized စစ်တမ်းမှအချက်အလက်များကို (2013)
အစ်ကို-အစ်မသှေးရငျးခငျြးကာမဆကျဆံခွငျး: အမည်မသိကွန်ပျူတာ-ကူညီမိမိကိုယ်ကိုအင်တာဗျူးတွေကနေဒေတာတွေကို (2013)
တစ်ဦး Nonhuman မျောက်အတွက်အေးစက်လိင်စိတ်နိုးထ (2011)
ဘေလီနှင့်ဘေလီ (2013) နှင့်အခွံ (2013) မှပြန်မယ်: Alternative ကလေးဘဝအခက်အခဲတွေအနက် The Associated များအတွက်ူးပ, ကလေးဘဝအလွဲသုံးမှုနှင့်အရွယ်ရောက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရှေ့တိုင်းဆန်စဉ်းစား
Dopamine, သင်ယူမှုနှင့်ဆုလာဘ်-ရှာကြံအပြုအမူ (2007)
Enhanced D2-type အမျိုးအစားအဲဒီ receptor လှုပ်ရှားမှုအထီးကြွက် (2012) တွင် conditional လိင်တူချင်းမိတ်ဖက် preference ကို၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုနိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ်
အိမ်ထောင်ဖက်ရွေးချယ်မှု (2018) တွင်အကဲဖြတ်ခြင်းနှင့် hedonic တန်ဖိုးကို
ဆန္ဒရှိဂန္ထဝင်အေးစက်လူ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှု (2015) ၏မျိုးသုဉ်း
Labiaplasty ခံယူဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ကထိန်းချုပ်ထားဒါကအချက်များ: မီဒီယာ, ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးနှင့်စိတ်ဓာတ်ကောင်းပြီ-ခံ (2016)
လိင်ကွဲအတွေ့အကြုံကိုအထီးကြွက် (2017) တွင် conditional လိင်တူချင်းမိတ်ဖက် preference ကို၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုကာကွယ်ပေးသည်
အထီးငိုကြွေးနေသောကောင်ကလေး Preferences: ဘယ်မှာရှိတဲ့အခါ, အဘယ်ကြောင့်နည်း (2015)
အထီးကြွက်များတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူထိန်းညှိအာရုံခံ၏ subpopulations အပေါ်စိတ်ကြွဆေးလုပ်ရပ်များ (2009)
ဆုလာဘ်-guided နျူကလီးယပ် accumbens အတွက် dopamine ကျော်လွန်သင်ယူခြင်း: cortico-Basal ganglia ကွန်ရက်များ၏သမာဓိလုပ်ဆောင်ချက်များကို (2008)
quinpirole ၏သက်ရောက်မှုအောက်တွင်လိင်တူချင်းတွဲပြီးယောက်ျားတစ်ဦး conditional လူမှုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအဖော် preference ကို induces, ဒါပေမယ့်မရအမျိုးသမီးကြွက် (2011) တွင်
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုလိင်စိတ်နိုးထ: တစ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိုးရိမ်ပူပန်လှုံ့ဆော်မှုစဉ်အတွင်း arousal ၏နှိုင်းယှဉ်ခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပျြောအပါးလှုံ့ဆော်မှု (1987)
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Conspecific တက်ကြွတုံ့ပြန်မှု (အမာရွတ်): အဆိုပါအမျိုးသမီးဦးနှောက်ထဲမှာမိခင်သင်ယူနှင့်ပလပ်စတစ် Disrupts ကြောင်းလိင်စိတ်ဒဏ်ရာများ၏မော်ဒယ် (2016)
အဆိုပါဆယ်ကျော်သက်ကြွက်ဦးနှောက်ဟျောမုနျးလွှမ်းမိုးမှုနှင့်ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာယန္တရားများ (2013) ၏လိင်ကွဲပြားခြားနားမှု
အမျိုးသမီးကြွက်များတွင်လိင်အတွေ့အကြုံကို: ဆယ်လူလာယန္တယားများနှင့်အလုပ်လုပ်တဲ့အကျိုးဆက်များ (2006)
အထီးကြွက်များတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုလာဘ်: သုတ်ရည်လွှတ်နဲ့ဆက်စပ် conditional ရာအရပ်ကိုဦးစားပေးအပေါ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံ၏ဆိုးကျိုးများနှင့် intromissions (2009)
အစ်မ-အစ်မသှေးရငျးခငျြးကာမဆကျဆံခွငျး: အမည်မသိကွန်ပျူတာစစ်တမ်း (2013) မှဒေတာများ
12,000 လူမျိုး၏လေ့လာမှုလူကြီးသို့လိင်အပြောင်းအလဲများကပြောပါတယ် - အမျိုးသမီးဦးစားပေးအချိန် (2019) ကျော်ပိုပြီးအရည်များမှာ
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compulsive အတွက်နျ Classical ကိုက်၏အခန်းက္ပတစ်ဦးကရှေ့ပြေးလေ့လာမှု (2014)
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအတွက်အေးစက်, သင်ယူမှုနှင့် dopamine ၏အခန်းကဏ္ဍကို: တိရိစ္ဆာန်နှင့်လူ့လေ့လာမှုများတစ်ဇာတ်ကြောင်းပြန်လည်သုံးသပ် (2013)
gynandromorphophilic ယောက်ျားဘယ်သူနည်း လိင်ပြောင်းအမျိုးသမီးများ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ဝင်စားမှုနှင့်အတူ Characterizing ယောက်ျား (2015)
အဘယ်သူသည်အဘယ်အဘယ်မှာအခါ (နှင့်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးပင်အဘယ်ကြောင့်)? ဘယ်လိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုလာဘ်၏အတွေ့အကြုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ, preference ကိုများနှင့်စွမ်းဆောင်ရည် (2012) ကိုဆက်သွယ်
အမျိုးသမီးရေးရာစအိုလိင်ဆက်ဆံအတွက်ဆွဲဆောင်ပါအဘယ်ကြောင့်: တစ်အရည်အသွေးလေ့လာမှု (2014) မှရလဒ်များ
oxytocin နှင့် Dopamine ကလွှမ်းမိုးကြွက်များအား (L) ကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဦးစားပေးမှု
(L) သည်အထိဂျာကင်အင်္ကျီအတွင်းခံ Love အဘယ်သူသည်အမျိုးသားများအတွက်အကြောင်းကျွန်ုပ်တို့အကြောင်းကိုပြောပြပါအဘယျသို့ဝတ်ဆင်နိုင်ပါသလား? (2014)